बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा थप एक संक्रमितको मृत्यु « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा थप एक संक्रमितको मृत्यु
२०७७, १७ भाद्र बुधबार ११:२७ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, तिलोत्तमा । रूपन्देहीको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा थप एक संक्रमितको मृत्यु भएको छ । कपिलवस्तु–११ की ६० वर्षीया महिलाको बुधबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
भदौ ७ गते कोरोना पोजिटिभ भई अस्पताल भर्ना भएकी उनलाई आईसीयूमा राखी उपचार गरिएको थियो । उपचारमा संलग्न चिकित्सका अनुसार उनलाई श्वासप्रश्वासको समस्या र ज्वरो थियो । साथै उनी पहिलेदेखि उच्च रक्तचापकी बिरामी रहेको डा. गौतमको भनाई छ ।
अहिले कोरोना विशेष अस्पतालको सामान्य कक्षमा १६, आईसीयूमा १५ र भेन्टिलेटरमा ४ जनाको उपचार भइरहेको अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो । यससँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्पतालमा मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ । अस्पतालको फिभर क्लिनिक आइसोलेसनमा २ जनाको मृत्यु भएको थापाले बताउनुभयो ।